What is your ability to work under pressure? ﻿
ချိတ်ဆွဲရန်စာတန်း: the most common interview questions your ability to work under pressure.
ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို လှည့်ကွက်မေးခွန်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂရုတစိုက်နဲ့ သတိပြုပြီးဖြေကြားရမှာပါ။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကောင်းမြင်တဲ့ ဝါဒရှိကြောင်း ပေါ်လွင်အောင် ပြန်လည်ဖြေကြားသင့်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် စိတ်ခေါ်မှုတွေ၊ ဖိအားတွေအောက်မှာ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရလေလေ ပိုပြီးအောင်မြင်လေလေ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ရအောင် ဖြေဆိုသင့်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ အရည်အချင်းတွေပေါ် အခြေခံပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးမြောက်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်လိုရယူတယ်။ အောင်မြင်အောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းရှာ လုပ်ကိုင်တတ်တယ်။ စတဲ့ကြောင်းအရာတွေကို ဦးစားပေး ဖြေကြားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ယခင်က လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပါက ခိုင်းနှိုင်း ဥပမာပေးနိုင်သလို၊ မရှိခဲ့ရလည်း ကျောင်းနေစဉ်က ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ဖိအားဒဏ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အလုပ်ဖိအားဒဏ်တွေအောက်မှာ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အဓိကတွန်းအားကို ဘယ်ကရရှိတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်အောင်ဖြေဆိုတဲ့အခါမှာ သတိပြုရမှာက ရရှိတဲ့ စည်းစိမ် (လစာ)နဲ့ ခံစားခွင့်တွေကြောင့်လို့ အကြောင်းပြ ဖြေဆိုခြင်းကို လုံးဝ မပြုလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ www.joblesws.com.mm